Android Q na-enyekwa ụra ụra | Androidsis
Gam akporo Q na-enye pra Na-agbanwe agbanwe maka ụfọdụ ndị ọrụ
Abụọ n'ime atụmatụ ọ na-eweta A gam akporo ha na-agbanwe agbanwe nchapụta na batrị na-agbanwe agbanwe. Gam akporo Q na-eweta oku ọzọ Na-ehi ụra, na mgbakwunye na akụkọ niile na anyị ekwuolarị nkọwa banyere ụdị ọhụrụ nke Google OS maka smartphones.
Offọdụ ndị etinyeworị beta nke atọ nke gam akporo Q achọpụtala ọrụ ọhụrụ na menu ntọala, ebe ọ bụ na ekwupụtaghị ya.
Ọ bụrụ na ị na-agba gam akporo Q Beta 3, chọọ Na-agbanwe agbanwe o Na-agbanwe agbanwe na nhazi menu. Ọ bụrụ na ọ dịịrị gị, ọ kwesịrị ịdị na nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Na-ehi ụra na-agbanwe agbanwe na gam akporo Q
Nkọwa nke atụmatụ ụra Na-ekwu "Ihuenyo gị agaghị agba ọchịchịrị ma ị ga-ehi ụra ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ achọpụta uche gị ugbu a". Site na nkọwa, ọ na-egosi na ekwentị ga-enwe ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na ị na-ele ya anya, ọbụlagodi na ị naghị emetụ ya aka, ọ ga-egbochi ihuenyo ihi ụra.
Nke a bụ yiri Smart Stay si Samsung nke malitere na Galaxy S3 ọtụtụ afọ gara aga. Atụmatụ ahụ jiri igwefoto n'ihu ekwentị mara ma ọ bụrụ na onye ọrụ na-elele na ihuenyo ahụ.
Enweghị mgba ọkụ maka ọrụ ahụ, na n’ihi na ọ ka dị na beta, ọ pụtara na ọ gwụbeghị, ọ ga-abụ na o zughị okè. Anyị amaghị ma Google ga-ejikwa igwefoto dị n'ihu maka atụmatụ a.
Smartphones dakọtara na beta nke atọ nke gam akporo Q
Ka ọ dị ugbu a, ịnwekwara ike ịnwe atụmatụ ndị ọzọ ekwuputara na Google I / O emere naanị, dịka Ọnọdụ Ọchịchịrị, Ngosiputa Ngosipụta, Ọnọdụ Idozi na ndị ọzọ. Can nwere ike ịmụtakwu banyere ya site na itinye njikọ nke abụọ anyị hapụrụ n'elu, na paragraf mbụ nke edemede a. N'ebe ahụ, anyị na-egosipụta ihe niile beta kacha ọhụrụ nke gam akporo Q ga-enye, nke abụghị obere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gam akporo Q na-enye pra Na-agbanwe agbanwe maka ụfọdụ ndị ọrụ
Site na Huawei n'isi, ụlọ ọrụ ndị China na-eduzi ngwa ikikere 5G zuru ụwa ọnụ
Sharp Aquos R3: Ọhụrụ dị elu na njedebe ọhụụ